निर्मला पन्तको कथामा आधारित फिल्म डिशहोममार्फत रिलिज गरिँदै
कर्पोरेट नेपाल , ३० बैशाख २०७७, मंगलवार, ०३:५८ pm
काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) महामारी रोक्न सरकारले लागू गरेको लकडाउन नहटेर छटपटाएका चलचित्र निर्माण आफ्ना चलचित्र रिलिज गर्न विकल्प खोज्न बाध्य भएका छन् । सोही क्रममा उनीहरुले डिशहोमलाई रोजेका छन् । फिल्म हलहरु कहिले खुल्ने ? भन्ने टुँगो नभएपछि उनीहरु बाध्य भएर विकल्पको खोजीमा पुगेका छन् ।
करोडौं रुपियाँ लगानी गरेर फिल्म निर्माण गरेका लगानीकर्ता मेहनत गरेका कलाकारहरु हलहरु बन्द हुँदा निराश देखिन्छन् । यसै क्रममा ‘कोपिला’ नामक फिल्म डिशहोम च्यानलमार्फत रिलिज गर्ने निष्कर्षमा फिल्म निर्माता पुगेका छन् ।
यस फिल्मका निर्माता मणिराज गौतमले डिशहोमको पे च्यानलमार्फत आफ्नो फिल्म रिलिज गरिने जानकारी दिएका छन् । दर्शकहरूले यो फिल्म डिशहोमको च्यानल नम्बर १०८ मा पैसा तिरेर हेर्न सक्नेछन् । गौतमका अनुसार हल कहिले खुल्ने हो ? टुंगो नभएकाले वैशाख ३० गतेबाट दैनिक आठ सोको दरले अब डिसहोमबाट फिल्म रिलिज गरिने छ । लकडाउनको अहिलेको समयमा दर्शकहरूले घरमै बसेर आफनो अनुकुलको समयमा नयाँ फिल्म हेर्ने मौका पाउने छन् ।
कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्याको विषयमा आधारित यो फिल्मको ट्रेलर सार्वजनिक गर्ने क्रममा निर्मलाको परिवारलाई ५० हजार रुपियाँ सहयोग पनि गरिएको थियो । चलचित्र प्रर्दशनबाट आएको रकमबाट १० प्रतिशत निर्मला पन्तको परिवारलाई प्रदान गरिने जनाइएको छ ।
कोपिला फिल्मको निर्देशक शिवम अधिकारी गरेका छन् भने गणेश गिरीको प्रस्तुति रहेको छ । यसको कार्यकारी निर्मातामा सुवास काफ्ले, निर्मातामा समीर मिया र रामेश्वर कार्की छन् । फिल्ममा सरिता गिरी, गणेश गिरी र सञ्जीवनी खरेलसँगै प्रकृति खरेल, ऋद्धिचरण श्रेष्ठ, विमल पौडेल, पुष्प आचार्य, सुशान्त श्रेष्ठ, अस्मिन घिमिरे, अस्मिता जुरेली, प्रतीक्षा खड्का, राखी क्षत्रीलगायतको अभिनय गरेका छन् । दीपक शर्माको संगीत रहेको कोपिला निर्देशक अधिकारीको लेखन, रामेश्वर कार्कीको छायांकन र समीर मियाको सम्पादनमा बनेको हो ।
दीपिका र मेघनाको ‘छपाक’ चलचित्र रिलिजअघि नै विवादमा
चलचित्र ‘लभ डायरिज’ को टिजर सार्वजनिक
विराजको एक्सन चलचित्र ‘साङलो’को ट्रेलर सार्वजनिक
सार्वजनिक भयो ‘लप्पन छप्पन २’ को टिजर (भिडियोसहित)
‘के घर के डेरा’ फिल्मको घोषणा
सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले सबै कर्मचारीको गरायो कोरोना बीमा